Ihlabathi liqalise njani ngokujonga kwehlabathi lakho? Ingaba kukho i-spark ye-cosmic ephasayo evela ngaphandle? Ingaba ubomi buvela ngokohlobo olusondeleyo lokuphila? Ingaba umntu ophakamileyo wayedala ihlabathi kwiintsuku ezisixhenxe kwaye yakha umfazi wokuqala kwimbambo yomntu wokuqala (wesilisa)? Ngaba kukho i-chaos enkulu ekhuphayo ephuma kuyo inqabileyo enkulu yenkqantosi kunye neenkomo zetyuwa? Iqanda le-cosmic?
Intsomi yamaGrike ineendaba zokudala ezihluke kakhulu kwibali eliqhelekileyo lika-Adam noEva okanye iBang Bang.
Kwiingcamango zamaGrike malunga nehlabathi eliqala, iingqungquthela zobukhohlisi zabazali zineenkcukacha zokungcatsha. Uyakufumana uthando kunye nokunyaniseka. Kukho zonke izinto ezibalulekileyo zeendlela ezifanelekileyo. Ukudalwa kokuzalwa kunye ne-cosmic kuxhunyiwe. Iintaba nezinye iindawo zomzimba zehlabathi zizalwa ngokuzala. Kuyavunywa, kuzalana phakathi kwezinto esizicingayo njengento yokunyusa, kodwa le nguqulelo yamandulo kunye nenye yeengcamango zehlabathi zamandulo.
1. Ukhohlisi lwabazali:
Kwisizukulwana 1, isibhakabhaka (uranus), obonakala engenalo uthando kuyo yonke inzala yakhe (okanye mhlawumbi ufuna nje umfazi wakhe konke), ufihla abantwana bakhe ngaphakathi kumfazi wakhe, uMama weMhlaba (Gaia).
2. I- Filial Betrayal:
Kwisizukulwana sesi-2, uyise weTitan (uCronus) ugawula abantwana bakhe, ii-Olympians ezandula.
3. KwiGeneration 3, oothixo bamaOlimpiki kunye noothixokazi bafunde kwimimiselo yookhokho babo, ngoko kukho ukukhohlisa okungakumbi kwabazali:
> UZeus uyabetha omnye umlingane kwaye unqamle ukuba uza kuzaliswa inzala yomnye ngaphakathi ngaphakathi emva kokubulala umama.
> Hera, umfazi kaZeus, udala unkulunkulu - ngaphandle komlingane, kodwa yena akakhuselekanga kubazali bakhe, kuba uHera (okanye uZeus) unxusa unyana wakhe ukusuka eMat. Olympus.
"Isizukulwana" sichaza ukuza kuba khona, ngoko oko kwakukho ukususela ekuqaleni akusekho kwaye ayikwazi ukuveliswa. Yintoni ehlala ikhona, nokuba ingaba unkulunkulu okanye amandla amakhulu (apha, i- Chaos ), akusona "isizukulwana" sokuqala. Ukuba, ukuba kube lula, kufuna inamba, ingathunyelwa njengeSizukulwane soNyaka.
Nokuba isizukulwana sokuqala apha siyancipha xa sihlolisiswa kakhulu, kuba kungathiwa kuhlanganisa izizukulwana ezi-3, kodwa oko akukwenzeki ngokubhekiselele kulo mbono kubazali (ingakumbi, oobawo) kunye nobudlelwane babo obukhohlisayo nabantwana babo.
Ngokutsho kwezinye iinguqulelo zamaGrike, ekuqaleni kwendalo ikhona i-Chaos . I-Chaos yayiye yedwa [ Hesiod Theog. l.116 ], kodwa kungekudala uGaia (uMhlaba) wabonakala. Ngaphandle kokuncedisa iqabane lezesondo, uGaia wazala
Uranus (i-Sky) ukubonelela kunye kunye noyise oyise.
Uran ukhonza ubaba, unina uGaia wazala
i- Cyclopes (i-Cyclops), kunye
12 Titans .
Ekugqibeleni, ii-Titans ezili-12 zazibhanqa, indoda kunye nentombi:
Oceanus kunye neTethys,
I-Crius ne-Mnemosyne, kwaye
ukuvelisa imifula kunye nemithombo, isizukulwana sesibini sesiTitans, iAtlas ne- Prometheus , inyanga (Selene), ilanga ( Helios ) kunye nabanye abaninzi.
Ngaphambili, ngaphambi kokuba i-Titans idityaniswe, uyise, u-Uranus, owayenentlonelo kwaye eyika ngokufanelekileyo ukuba omnye wabantwana bakhe angamqothula, uvale bonke abantwana bakhe ngaphakathi komfazi wakhe, uMama weMhlaba (Gaia).
" Wayehlala ewafihla yonke indawo kwindawo eyimfihlo yomhlaba, ngokukhawuleza ukuba ngamnye azalwe, kwaye akayi kubavumela ukuba bafike ekukhanyeni; kwaye izulu lavuya kakhulu ekusebenzeni kwakhe okubi. , kwaye wenza i-elementary gray gint kunye nomlobo omkhulu, wamxelela ukuba icebo kubantwana bakhe abathandekayo. "
- I-Hesiod Theogony , okuyiyo yonke isizukulwana soothixo.
Enye inguqu ivela ku- 1.1.4 uApollodorus *, othi uGaia wayecaphukile ngenxa yokuba u-Uranus wayelahlile abantwana bakhe bokuqala, ii-Cyclopes, kwiTartarus. [ Yabona, ndakuxelela ukuba kukho uthando; apha, umama. ] Naluphi na umlinganiselo, uGaia wayethukuthele umyeni wakhe ngokuvalela abantwana bakhe ngaphakathi okanye eTartarus, kwaye wayefuna ukuba abantwana bakhe bakhululwe. UCronus, unyana onobubele, wavuma ukwenza umsebenzi ongcolileyo: wasebenzisa le galethi ye-flint ukugxotha uyise, ukumnika amandla (ngaphandle kwamandla).
Emva koko uTitan Cronus, kunye noodadewabo uRhea njengomfazi, batyhila abantwana abathandathu. Lawa awonkulunkulu bamaOlimpiki noothixokazi:
Hades, kwaye ekugqibeleni,
Uqalekisiwe nguyise (Uranus), uTitan Cronus wayesaba abantwana bakhe. Emva koko, wayesazi indlela ayenayo ngayo ubaba.
Wayesazi kakuhle kunokuba aphinde aphange iimpazamo uyise azenzile ekushiyekeni kwakhe, ngenxa yokuba wayevalele abantwana bakhe emzimbeni womfazi (okanye iTartarus), uCronus wabagwinya.
Njengomama wakhe uMhlaba (uGaia) phambi kwakhe, uRhea wayefuna ukuba abantwana bakhe bakhululwe. Ngokuncedwa ngabazali bakhe (u-Uranus noGaia), wacinga indlela yokulwa nomyeni wakhe. Xa kwakuyisikhathi sokuzala uZeus, uRhea wenza ngokufihlakeleyo. UCronus wayazi ukuba ufanelekile kwaye wabuza ukuba umntwana omtsha angagwinya. Esikhundleni sokumondla uZeus, uRhea washintsha ilitye. (Akukho mntu wathi i-Titans yayingamaqhosha engqondo.)
UZeus wakhula ngokukhuselekileyo kwaze kwaba yilapho esekhulile ngokwaneleyo ukuba amphoqe uyise ukuba aphinde avuselele abazalwana bakhe abahlanu (iHayidesi, iPoseidon, iDemeter, iHera kunye neHastia). Njengo-GS Kirk ubhekisela kwi -Nature of Greek Myths , kunye nokuzalwa ngokutsha kwabazalwana noodadewabo, uZeus, waba ngumncinane, waba ngumdala kunabo bonke. Naluphi na umlinganiselo, nokuba ukubuyiswa-ukuguqulwa akuyikukuchukumisa ukuba uZeus wayenokuthi ungumdala kunabo bonke, waba yinkokeli yonqulo kwiMthi ekhethiweyo yekhephu. Olympus.
UZeyus, i-Olympian yesizukulwana sokuqala (nangona kwisizukulwana sesithathu ukususela ekudalweni), wayenguyise kwisizukulwana sesibini sesizukulwana sama-Olympians - ahlanganiswe kwii-akhawunti ezahlukeneyo:
Uludwe lwaba-Olympian luququze noothixokazi abali-12 , kodwa ulwazisi lwabo alufani. Hestia noDemeter, abanelungelo lokufumana amabala e-Olympus, ngamanye amaxesha bazinikela izihlalo zabo.
Abazali baka-Aphrodite noHephaestus
Nangona bebanokuba ngabantwana bakaZeus, isizukulwana sesi-2 sesizukulwana sesi-Olympiya sibuzwa:
Abanye bathi uAphrodite ( unkulunkulukazi wothando kunye nobuhle) waphuma kwi-foam waza wahlula i-Uranus. UHomer ubhekisela kuAphrodite njengentombi kaDione noZeus.
Abanye (kuquka iHesiod kwisiqendu sesingeniso) bathi uHera ungumzali wedwa kaHephaestus, unkulunkulu onobumba osiqhwala.
" Kodwa uZeyus ngokwakhe wazala ekhanda lakhe kwiTritogeneia (29) eyamehlo enzima, inkohlakalo, inkokeli-mkhokeli, inkokheli, iindlovukazi, ovuyiswayo kunye nemfazwe. umanyano noZeus - kuba wayecaphuke kakhulu kwaye waphikisana nomlingane wakhe - waziwa ngokuba ngu-Hephaestus, onguchwepheshe kwizakhono ngaphezu kwabo bonke oonyana baseZulwini. "
- I- Hesiod Theogony 924ff
Kuyathakazelisa, kodwa ulwazi lwam luyinto engabalulekanga, ukuba abo babini base-Olympiki abanomtshato ongaziqinisekile.
Uninzi lwamaqumrhu kaZeus aluqhelekanga; Ngokomzekelo, wazifihla njengeentaka ze-cuckoo ukunyenga uHera. Abantwana bakhe babini bazalwa ngendlela ayenokufunda ngayo kuyise okanye uyise; okokuthi, njengoyise uCronus, uZeus akagulanga kuphela umntwana kodwa unina uMetis ngoxa wayekhulelwe. Xa umntwana wayemisile ngokupheleleyo, uZeus wazala intombi yabo uAthena. Ukungabikho kwezixhobo ezifanelekileyo zesetyhini, wazala ngentloko yakhe. Emva kokuba uZeyus esabe okanye atshise umninkosikazi wakhe uSele, kodwa ngaphambi kokuba atshabalalise ngokupheleleyo, uZeus wasusa umntwana waseDionysus esibelethweni sakhe waza wayifaka emthonjeni wakhe apho ixoxwa lewayini yayilungele ukulungele ukuzalwa kwakhona.
* U-Apollodorus, owe-2 Century BC, isazi seGrike, wabhala iIkronike ne- On the Gods , kodwa oku kuthethwa apha yi- Bibliotheca okanye iThalayibrari , ekuthethwa ngaye ngamanga.
Yayiyintoni Isizwe Sokuqala samaKristu?
Oodadekazi be-Mythology yamaGrike
Ezi ziqalekiso zeGrisi-Roma zazingumzekelo ongcono kakhulu wokubuyisela
Amadoda adumile e-Olympic Figure Skating
I-Star Spangled Strangeness: 7 I-4 ye-July eyinqanaba
Kutheni ioli neeManzi Musa ukuxuba
Ngamaxesha amaninzi kufuneka ubeke iifutha zakho zeTable Tennis?